Fifindràmonina · Mey, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fifindràmonina · Mey, 2017
Tantara mikasika ny Fifindràmonina tamin'ny Mey, 2017
Maraoka: “Gaza Avokoa Izahay”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Mey 2017
Rabat dia 3850 kilaometatra avy ao Gaza, saingy tsy manakana an'i Maraoka tsy hahatsapa fahatsapana firaisankina lehibe amin'ny Palestiniana izany. Satria mitohy miharatsy ny fanafihan'i Israely an'i Gaza, Manohy miloa-bava ireo bilaogera ao Maraoka.
Afrika Mainty 22 Mey 2017
Andian-taranaka Voalohany Sy Faharoan'ireo Holandey, Manontany Tena Raha Horaisina Ho Toy Ny Olompirenena Ihany Indray Andro Any
Eoropa Andrefana 21 Mey 2017
Ny maha-izy azy ny tena, ny fidirana anaty fiarahamonina ary ny resaka Silamo, samy resaka saropady ho an'ireo fifidianana hatao amin'ny lohataona ao Holandy ireo. Ivon'ny adihevitra ny hoe iza no tena mpikambana ao anatin'ny fiarahamonina Holandey.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 19 Mey 2017
"..Tsy hoe fahakamoana izany, fa momba ny fahamendrehana maha-olombelona raha tsy mahavita ireo filàna fototra ny karama"
Afrika Mainty 16 Mey 2017
Satria misondrotra ny hofantrano ao Seattle, any amin'ny morontsiraka andrefan'i Etazonia, miatrika ny tena zava-mahatahotra azy ireo Kôngôley mpitsoaponenana: ny ho lasa tsy manan-kialofana.
Nahoana no Niara-niròna tao Amin'ny Sisintany Amerikana Ireo Mpitady Fialokalofana Miisa 78, Na dia Mety Holavina Aza Ny Fangatahan'izy ireo
Amerika Avaratra 16 Mey 2017
Ny harivan'ny 7 Mey 2017, mpifindramonina Nikaragoàna, Salvadaoriana, Goatemalteka sy Haondiorana enimpolo mahery no tonga tao amin'ny sisiny avaratr'i Tijuana mba hangataka fialokalofana faobe ao amin'ny Vavahadin'ny Seranantsambo San Ysidro ao California.
Sehatra Nanampy Ireo Mpifindra-monina An'arivony Hifandray Amin'ny Fianakaviany
Afrika Atsimo 13 Mey 2017
Manerantany, tombanana ho 65 tapitrisa eo ireo olona voatery nandositra ny tanindrazan'izy ireo noho ny antony samihafa. Ity sehatra ity dia mikendry hampifandray ireo fianakaviana tafasaraka.
“Ravao ny Manda “: Hetsi-panoherana Artistika Ataon'ny Amboaram-peon-Java-maneno Dresden Ao Amin'ny Sisintanin'i Etazonia sy i Meksika
Amerika Avaratra 13 Mey 2017
"Iray ihany isika , na dia eo aza ny fiampisarahan'ny manda sy ny sisintany."